संक्रमित ८ मध्ये दुई जनाको अवस्था सामान्य: चाँडै डिस्चार्ज हुँदै - satkar post
संक्रमित ८ मध्ये दुई जनाको अवस्था सामान्य: चाँडै डिस्चार्ज हुँदै
चैत्र २९, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २९ चैत : टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रो’ग अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उपचारमा कोभिड–१९ का दुई सङ्क्रमित व्यक्ति केही दिनभित्रै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै छन् ।कोभिड–१९ सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया पूरा भएपछि छिट्टै डिस्चार्ज हुने अस्पतालका नि’र्देशक डा.सागर राजभण्डारीले जनाकाकरी दिए । उनले भने,‘अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका कोभिड सङ्क्रमित दुवै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।
दुई दिनभित्र अन्तिम रिपोर्ट आउनेछ, त्यो रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएमा डिस्चार्ज गरिनेछ । ’टेकु अस्पतालमा अहिले कोभिड शङ्का’स्पद नौ जनाको उपचार भइरहेको छ । यीमध्ये दुई जनामा कोभिड पोजेटिभ देखिएको छ भने बाँकी सात जनाको नेगेटिभ छ । तर पनि विभिन्न कारणले गर्दा सात जनालाई अस्पतालमै राख्नुपर्ने अवस्था भएको अस्पतालले जनाएको छ । नि’र्देशक डा. राजभण्डारीले विगतका तुलनामा पछिल्ला दिनमा अस्पतालको सेवामा सहजता आएको बताए ।
जनशक्ति तथा उपकरणको कमी छैन । कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल घोषणा गरिएको र लकडाउनका कारण पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा बि’रामी नआएको उनको भनाइ छ ।‘अस्पतालमा अहिले पहिलाभन्दा बि’रामीको चाप कम छ । क्षयरो’गलगायत अन्य सरुवा रो’गका बि’रामीलाई अन्यत्रै सिफारिस गरिएको हुनाले कोभिडको उपचारमा सहजता आएको छ’, निर्दे’शक डा. राजभण्डारीले बताए ।अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको रे’बिजको भ्या’क्सिन भने नियमित भइरहेको छ ।
अहिले दैनिक ७० जनासम्म रे’बिजको सुई लगाउन अस्पताल आउने गरेको अस्पतालका नि’र्देशक राजभण्डारीले जनाकारी दिए । टेकु अस्पतालमा हाल पाँच आइसोलेसन र ३० क्वारेन्टाइन कक्ष छन् । अहिले २५ आइसोलेसन र २० सघन उपचारकक्ष तयार गर्ने कार्य उच्चगतिमा भइरहेको पनि नि’र्देशक राजभण्डारीले बताए ।
‘अक्सिजन प्लाण्ट’ सहितको स’घन उपचारकक्ष तयार गरिँदैछ ।अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी बि’रामीको कपडा धुनका लागि अस्पतालमै वासिङ मेसिन, विद्युतका लागि ‘पावर ब्याकअप’ तयार गरेको अस्पतालले जनाएको छ । विश्व म’हामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को स’ङ्क्रमण नेपालमा पनि देखा परेपछि यो निकै चि’न्ताको विषय बनेको थियो । तर, कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका बि’रामी उपचारपछि निको भएर घर फर्किन लागेका छन् । यसअघि नेपालमा पहिलोपटक कोभिडको सङ्क्रमण फेला परेका एक नेपाली उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।
कोभिड पहिलोपटक देखापरेको चीनको वुहान शहरबाट अएका उनी उपचारपछि घर फर्किएका थिए । नेपालमा दोस्रोपटक गत चैत १० गते १९ वर्षीया युवतीमा कोभिडको स’ङ्क्रमण देखापरेको थियो ।नेपालमा हालसम्म नौ जनामा कोभिडको स’ङ्क्रमण देखिए पनि एक जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । नेपालमा दोस्रोपटक गत चैत १० गते कोभिडको नयाँ सङ्क्र’मित फेला परेको थियो । चैत ४ गते कतार एयरवेजको जहाजमार्फत फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी १९ वर्षीया युवतीमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएको थियो ।त्यस्तै चैत १२ गते पुनः एक जनामा कोभिड पोजेटिभ देखिएको थियो ।
कोभिड पोजेटिभ देखिएका ती पुरुष व्यक्तिको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन । यस्तै चैत २० गते बागलुङ्का ६५ वर्षीया एक ज्येष्ठ नागरिकमा कोभिड पुष्टि भएको थियो । पछिल्लोपटक चैत २२ गते सुदूरपश्चिममा एकै दिन थप तीन जनामा कोभिड स’ङ्क्रमण भेटिएको थियो । भारतको मुम्बईबाट फर्किएका कैलालीका २१ वर्षीय र उत्तराखण्डबाट फर्किएका कञ्चनपुरका ४१ वर्षीय पुरूष तथा कैलालीको ३४ वर्षीया महिलामा कोभिड–१९ को स’ङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इ’पिडीमियोलोजी तथा रो’ग निय’न्त्रण महाशाखाले जनाएको छ ।